काठमाडौँ – स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने भान्टा निकै फाइदाजनक हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहने हुँदा युवतीहरुले भण्टालाई मन पराउने गर्छन् । उनीहरु स्वादिलो तरकारी तथा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरुको सौखिन हुन्छन् । हाम्रो गाउँघर तिर पाइने भाण्टामा निकै पौष्टिक तत्व पाइन्छ । भान्टामा भिटामिन सि पनि पाइन्छ । भान्टामा पाइने पौष्टिक तत्वले विभिन्न विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
मन्दिरमा धेरै चडाइने वस्तुहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी नरिवल प्रयोग गरिन्छ। नरिवललाइ संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ। श्रीफला पनि भनिन्छ नरिवललाइ जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फल’। भगवानलाइ चढाउनको लागि राम्रो अनि उच्च फल मानिन्छ त्यसैले त महाफला पनि भनिन्छ यो फललाइ। उत्पति कसरी भयो ? वैदिक कथाहरुमा यसको उत्पतिको बारेमा राम्रोसंग उल्लेख गरेको पाइदैन। तर पुराण अनि महाकाव्यहरुमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । १- हनुमान चालिसाः हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on December 7, 2018 December 7, 2018 Author onlinedarpan	Comment(0)
जताततै विवाहको दृष्य देखिन्छ । धेरै युवायुवतीहरु जोडी बन्न लागेका छन् । कतै प्रेम विवाह हुँदैछ, कतै मागी विवाह हुन लाग्दैछ। हिजोआज हामी फेसबुकको पुस्तामा छौ । फेसबुकमा हेरेको, भेटेको आधारमा पनि विवाह भैरहेको हुन्छ । फेसबुककै आधारमा एकले अर्कालाई मन पराइरहँदा उनीहरूका अभिभावक एवं अग्रजहरूको आशीर्वाद छ कि छैन त्यो बिर्सिरहेका हुन्छन्। श्रीमान –श्रीमती विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
श्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित एकपटक अवश्य पढ्नु होला। एक दिन छोराले अाफ्नो पितासँग गुनासो गर्छन। छोरा := बुबा म मेरी पत्नीसँग अब सगै बस्न सक्दिन। बुबा:= किन छोरा, के भयो एक्कासि? छोरा := उनी धेरै बदलिएकी छिन। न मसँग राम्ररी कुरा गर्छिन। न मैले सोधेको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा बाँसको तामाको प्रचलन छ । नेपालमा यसको परिकार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…